काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को पहिलो ४ महीनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव २९ प्रतिशत बढी कर संकलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म रू. ३३ अर्ब कर संकलन गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा करीब रू.३८ अर्ब कर उठाएको हो । यद्यपि, कार्यालयले सो अवधिमा लक्ष्यभन्दा कम कर संकलन गरेको छ । कार्यालयले ४ महीनामा रू. ४७ अर्ब कर उठाउने लक्ष्य पाएको थियो ।
कार्यालयले चालू आवमा २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको छ । कार्यालयले विभाजन गरेका ६ ओटै क्षेत्रको कुल कर संकलन गत आवको तुलनामा वृद्धि भएको छ । कार्यालयका अनुसार विशेषगरी व्यापार, बैंक तथा फाइनान्स र गैरकृषि क्षेत्रबाट गत आवको सोही अवधिको तुलनामा कर संकलन धेरै बढेको छ ।
कार्यालयले आफूमातहतका करदातालाई कृषि, बैंक तथा फाइनान्स, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, उद्योग, सेवा र व्यापार गरी ६ क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । गत आवको प्रथम चौमासिकको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा व्यापार क्षेत्रबाट कर संकलनमा सर्वाधिक ३८ दशमलव ६ प्रतिशत वृद्धि भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । चालू आवको ४ महीनामा कार्यालयले व्यापार क्षेत्रबाट रू. ३ अर्ब ४३ करोड कर संकलन भएको छ, जबकि गत आवको सोही अवधिमा उक्त क्षेत्रबाट रू. २ अर्ब ४७ करोड कर संकलन भएको थियो ।
यस्तै, गैरकृषिमा २७ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै रू. २ अर्ब ६३ करोड कर संकलन भएको छ भने बैंक तथा फाइनान्स क्षेत्रमा २७ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १३ अर्ब ९१ करोड कर कार्यालयले उठाएको छ । कृषि क्षेत्रमा ५ दशमलव १, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा ६ दशमलव ८ र सेवा क्षेत्रमा १५ दशमलव १ प्रतिशतले कर संकलन बढेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
गत आवमा व्यापार क्षेत्रअन्तर्गत अटोमोबाइल्स तथा इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रबाट कम कर संकलन भएको थियो । सवारी किन्ने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेसँगै अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा मन्दी छाएको थियो भने अवैध मोबाइल आयातमा कडाइ गरेसँगै किनबेचमा कमी आएको थियो । तर, गत ७ महीनायता सवारीसाधनको किनबेच बढेसँगै अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा २१ प्रतिशतले कर संकलन बढेको कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘चालू आवको प्रथम चौमासिकमा सबै क्षेत्रको कर संकलन बढेको छ । यद्यपि, यसमा टीडीएसबाट धेरै कर कट्टी भएको छ,’ उनले भने, ‘चालू आवको ६ महीनापछि मात्र ठूला करदाताहरूले आफूले तिर्ने करको प्रारम्भिक विवरण बुझाउनेछन् । त्यसपछि सबै क्षेत्रको वास्तविक अवस्था थाहा हुनेछ ।’
केही उपक्षेत्रबाट कर संकलनमा कमी
कार्यालयका अनुसार केही उपक्षेत्रबाट भने कर संकलन घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गतको बीमाक्षेत्रबाट २ दशमलव ८ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटेको छ । पछिल्लो वर्षयता बीमा क्षेत्रमा भ्याट रकम घट्दै आएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट पनि भ्याट संकलनमा १० दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
त्यस्तै, सूर्तीजन्य वस्तु, ब्रुअरी, क्यासिनो, वेभरेज, सुपरमार्केट, होटल तथा रेस्टुराँ, फाइबर, निर्माण, अस्पताल, डिस्टिलरी, व्यवस्थापन, शिक्षा, टेक्सटाइल र लगानी कम्पनी जस्ता उपक्षेत्रबाट संकलन हुने कुल कर घटेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
# आर्थिक अभियान दैनिकको आजको प्रिन्ट संस्करण अन्तर्गत पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित ‘ठूला करदाता कार्यालयको पहिलो चौमासिक कर संकलन १४.२९ प्रतिशत वृद्धि’ शिर्षक समाचारको दोश्रो लाइनमा ‘रू.३८ अर्ब’ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ । –सम्पादक